Dowlada Soomaaliya oo sharaxday mowqifkeeda Khilaafka Sucuudiga iyo Canada. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Soomaaliya oo sharaxday mowqifkeeda Khilaafka Sucuudiga iyo Canada.
War qoraal ah oo shalay ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Dowlada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Sacuudiga, islamarkaana ay ka soo horjeedo in fara gelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha ee dowlad Madax banaan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markale faah faahin ka bixisay sababta ay ku taageertay dowladda Sacuudiga, kadib hadal ka soo baxay Wasiirka wasaarada arrimaha dibadda Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad.
Wasiir Cawad wuxuu sheegay inay Sacuudiga ku taageereen inaan arrimahooda gudaha aanan la fara gelin, si la mid ah sida ay arrimahooda gudaha ugu taageeri lahaayeen dalka Canada.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Canada ayaa dhankooda sheegay in dowlada Soomaaliya ay ku deg degtay taageerada Sucudiga loogana baahnaa inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafka labadaasi dal.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Canada waxay sidoo kale sheegeen in dowlada Soomaaliya ay ku haboonayd inay ka fakarto danaha shacabkeeda ku nool wadanka Canada ka hor intasyan go’aankaan qaadan.
Soomaaliya dalka Sucuudiga waxaa kala dhexeeya xiriir dhinacyo badan leh sidoo kale xiriirka ay la wadaagto wadanka Canada wuu wanaagsan yahay waxayna Canada ka mid tahay wadamada soo dahweeyay dadka ugu badan ee Soomaalida ah.
Sidoo kale qaar badan oo ka mid ah masuuliyiinta xilalka kala duwan ka haya dowlada Soomaaliya waxay haystaan dhalashada wadanka Canada,waxaana ka mid ah wasiirada arimaha dibada, gaadiidka iyo duulista hawada,qorshaynta iyo hormarinta dhaqaalaha,shaqada iyo shaqaalaha,dastuurka waxbarashada,haweenka iyo xaquuqul insaanka, Taliska Nabad Sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo ilaa ku dhawaada 10 ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee dowlada Soomaaliya
← Masuul iska casilay wasaarada gargaarka Soomaaliya.
Sentarada dalka oo doonayo in tallaabo laga qaado wasiirka arrimaha gudaha →